Zvinhu zvekuchinja | Kubva kuLinux
Ndinodzoka munguva pfupi ...
Ndave neinopfuura mwedzi zvichiteedzana kubvira mushure mekukurukurirana neUbuntuneros yenzvimbo iyi, ndakafunga kushandura OS X zvachose uye kunyange ndiri 100% ndinofara mune zvimwe zvinhu, panguva imwechete ndinonzwa kuti handina imba ... munguva pfupi inotevera ini ndinoshandisa Linux seyangu huru OS zvakare, hazvo, kuti panongopera zhizha uye ini ndisisina nguva yekutamba fomula 1 2012 (xD).
Chikonzero cheichi posvo chiri nyore, ini ndoda kuita kuzvitsoropodza muLinux uye ndosiya rondedzero yangu yechishuwo, chimwe chinhu chandinotarisira kuti chichachinja nekukurumidza uye kuva nani uye kuti vanogona kukunda avo vavanokwikwidza navo.
Ini ndinorangarira kuti rinenge vhiki rapfuura Metalbyte akandiudza kuti kushandisa OS X kwaive kwakaipisisa pane kushandisa Ubuntu, uye pamwe hongu, kana tikatarisa izvi kubva kune yefilosofi uye kwete inoshanda maonero, pamwe Apple rezinesi haisi kutanga kuchema ... (Asi ngazvitaurwe ... iyo Darwin kernel yakasununguka seLinux), asi kana isu tichifunga nezvekushandisa uye default application, Ubuntu iri kumashure zvakanyanya, (KDE inodarika OS X mune sarudzo, hongu), saka ini ndoda siya runyorwa rwangu rwezvinhu pane zvinhu zvandinotarisira kuona munguva pfupi muLinux:
1) Ipa rutsigiro rwekupedzisira rwekunyora mumavara echiJapan, MaKorea etc. Chinhu chandaifarira zvakanyanya nezve OS X ndiko kugona kusarudza kubva pakutanga mune mutauro wekunyora uye kuushandura zviri nyore. MuLinux zvinogona zvakare kuitwa, asi iwe unofanirwa kuisa mamwe mapakeji ..., ayo kune yangu mbatatisi haina kumbopedza ..., kana mune ino kesi ndinoziva, iri dura 8 XDDDD kukanganisa.
2) Mumwe mutambi akanaka uye anoshanda. Kunyangwe iTunes paWindows makomputa uye mamwe maPC ekare achizvuzvurudza, muOS X inowanzove nekuita kwakanaka kwazvo, chokwadi ndechekuti, ndinoda avo vatambi vemimhanzi vanotarisira zvakanyanya interface (ruzha muenzaniso), kwete kukanganwa wedzera mashandiro, senge zvakaenzana, kufukidza kurodha pasi, chitoro kwaunogona kurodha mumhanzi, akasiyana maalbum maonerwo uye kwete chete echinyakare chakamiswa chepamusoro maonero (clementine, amarok mukati), chitoro chemimhanzi, uye pamusoro pezvose, ndinoda maredhiyo, maredhiyo mazhinji , yepasi rose, jazi, chiJapan, chitendero, nhau, mitambo ... (yakakwana yeiyo icecast yechinyakare ... nedenga fm ...
3) Libreoffice interface inozorodza. Hongu ..., ndinofunga kuti kana tikatsvaga iyi blog makore maviri apfuura ..., taizowana vanhu vachikumbira chinongedzo chinja, chimwe chinhu chisati chaitika nanhasi uye chandiri kutanga kufunga kuti hachizomboitika. Ini handingodi chete kuti libreoffice interface ive yakanaka, asi ndinodawo kuti iite hupenyu hwangu huve nyore, kunyanya muCALC (ndaive nematambudziko mazhinji ndichiita rimwe basa ...), ini handibvunze kopi ms office, pachokwadi ini ndaigona kana kutora noti yeIwork mune dzimwe nzira.
4) Wayland. Pano tinopinda mune chimwe chinhu chagara chakandikonzera kutsamwa muLinux, iko kushandiswa kweXorg. Wayland inguva yemberi uye ndinovimba kuti munguva pfupi iri kutevera inogona kunge iripo pamatafura edu, kushandiswa kwe xorg hakutisunungure pakubvarura pasina munyori (kwin, compiz, compton ..), uye zvakagadzirawo zvimwe zvinhu zvinogumbura pakati pavo:
1: Kuti kana uchipinda mumutambo we1024 x 760 resolution, chinja kugadzirisa kwese nharaunda kwete kwete chete zvemutambo.
2: Kana mutambo ukapunzika, kazhinji nharaunda inogara yakadzika resolution uye ini ndaifanirwa kuenda kunoshandura resolution mu control panel .., asi dzimwe nguva resolution yacho yaive yakadzikira zvekuti ndaisakwanisa kudhindisa del kiyi shanduko .., nekuti haina kukwana pachiratidziri.
3: Kubhenekera kana iwe ukachinja kubva pahwindo rakazara kuenda pawindow mode, muenzaniso wakajeka ndipo paunenge uchiona bhaisikopo ne mplayer uye kamwe kamwe ziviso ye kmess kana tsitsi inowoneka.
Wayland inofanirwa kudzivirira zvinhu zvese izvi kuti zviitike.
5) Audio: Jack .., tinya ..., alsa, ndakavaedza vese, ndakavagadzirisa vese, uye nhasi hapana akakwanisa kundiudza maitiro ekurekodha odhiyo yemukati yepc uye maikorofoni panguva imwe chete, kukwanisa kugadzira mutambo ..., uye nezve pulseaudio ndinogona kungotaura zvakaipa.
Kunyangwe kupomba kuri kufambira mberi kukuru mukuita basa sezvo zvichiita kuti hupenyu huve nyore, ine usb mahedhifoni, 5.1 odhiyo uye mamwe mahebhu, pane yangu pc, ini handimbo, ndinodzokorora, yapedza kurira zvakanyatsojeka, ndinogona kugara ndichiona ruzha rwuri munziyo .. uye kwete, harisi dambudziko rekumisikidza, ndakaita zvese zvandaigona, shandura kumisikidza, kuita zvisipo uye kumisikidza mabasa zvinoenderana negwara riri muArchlinux .., asi hapana, kusvika nhasi chakakonzera matambudziko kwandiri kupfuura zvakanakira (zvirinani ndiri ndisingataure nezve zvinoitika newaini…)
Panguva ino, zvinoita sekunge vamwe vashandisi vanobhadharwa neheti tsvuku kutuka chero munhu anoti pulseaudio iri kuita zvisirizvo… (Vanababa, kuzvitsoropodza zvishoma… hazvingambotikuvadza…, kunyangwe vashandisi veApple vanogunun'una nezve zvakawanda zvinhu mu maforamu avo).
Ini handisisina zvichemo, izvi zvinhu zviri nyore, mune zvese zvimwe zvinhu ini ndinotenda kuti GNU / Linux yakanyanya kunaka, kumisikidza, sarudzo dzevashandisi ... mitambo iri yeOS X ichave yeLinux (ndatenda opengl).
Ndinovimba kuti mugore kubva ikozvino, paunotarisa izvi zvakare, ndinogona kutaura kuti zvizhinji zvacho chinhu chekare.
Kana mumwe munhu mushure meichi chinyorwa, achida kuuya kuzotsika kana kubatidza moto, ndinogona kungoti hazvigamuchire, ndinoda kuti pamwe chete tikurukure takadzikama zvinhu izvi uye kuti pfungwa dzinogona kupihwa pasina kukanganisa naamai vemunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Zvinhu zvekuchinja
Kana ari mutambi, hapana chaunorasikirwa nekuyedza guayadeque ... ndakamuziva iye kweanopfuura makore maviri ... uye ini handichinje chero chinhu ... kunze kwekunge ndiri mumahwindo ... sezvazviri panguva ino xD .... ahh uye nezve iko kuzvitsoropodza zvinoita sezvine basa ... Kwaziwai.
Pindura kune progdebian
Ini ndichakupa kuravira, ndatenda! 🙂
Edza tomahawk uye yarock futi. Tomahawk ine Mac vhezheni 😉
Tomahawk kwandiri ndiyo yakanakisa;), ingangoda mawairesi kuti awedzerwe uye zvingave zvakakwana: '(
Mmm edza yarock ipapo, inotsigira iyi mhando yeredhiyo.
* Ridza radio rukova (icecast, shoutcast, mushandisi rwizi mafaira)
Guayadeque ndanga ndichiishandisa kwechinguva, uye ndakaifarira zvakanyanya zvakare, uye yaitaridzika kunge yakakwana kwazvo maererano nemashandiro, sarudzo uye zvese izvo. Chinhu chega chisina kunyatso kundikurudzira ndechekuti raibhurari yemimhanzi yakanditakudza zvishoma nezvishoma pandakange ndaiswa mimhanzi yakawanda.
Uye kubvira pandakachinjira ku KDE ndakachinjira kuna Clementine, uye ndinofara naye zvakare. Ini ndinongopotsa mashoma mashoma asina kukosha zvakanyanya, sekukwanisa kuita audioscrobbling neLibre.fm uye kwete chete Last.fm (chimwe chinhu chandinosuwa kubva kuGuayadeque, icho chaitendera zvese panguva imwe chete).
Imwe yandaifarirawo yakawanda munguva yangu yeGNOME2 yaive gmusicbrowser, pamusoro pazvose nekuda kwekugona kusarudza akati wandei maficha ekuteedzera kune vamwe vatambi (saExaile, Rythmbox nevamwe vazhinji) kunyangwe iri nguva dzose iri mutambi mumwe mune zvimwe zvese. .
Ini ndichatorawo ziso (uye ndinzwe) kune vamwe vawakadoma uye vandisingazive nanhasi
Ngatione kana ndanzwisisa: ino blog inonzi "Kubva kuLinux" uye munyori anozvitsanangura se "Ndinotenda zvakasimba kuvhura sosi senzira yekusimudza nekusimudzira chikamu chemakomputa" uye ini ndinosangana nechinyorwa chakanyorwa nemumwe munhu anoshandisa Apple? Iri jee?
Ini ndinozvibvunza izvi ... O_O… pandev, Apple? … Zvakakomba? O_O
Yoyo ari mugadziri wekugadzira kupfuura ini XDDDD… .., kutaura munhu eheheheh. Ini chete yezhizha pandakanga ndichiridza fomula 1 uye kudaidzwa kweduty XD ..., munaGunyana uchandiona zvakare ndichishandisa arch ahahah
Muguta rangu mune chirevo chinoti "kana chisingakodzere iwe usagove", dama (mutoro, jee, joko) rinoenderera pauri, usapotere kune vamwe. xD
Chinyorwa chakanaka chekubuda mu "maitiro", kunyangwe iri blog ye linux, nguva nenguva zvakanaka kuti uone kuti ndeapi mamwe asiri-linux OSs anobata.
Uye, muzvikamu, zvese zviri zviviri Gabriel naSandy.
Inobata mabhora angu ayo, pese panotaurwa chimwe chinhu kunze kweLinux, mumwe munhu anosvetuka ndokutaura zvinhu se "zvakanyanyisa, wati OsX? oh ... na ... mwari »kukwana kwakawanda kwakawanda idiocy, kunyangwe kana asingashandise OsX idambudziko rake uye chaizvo izvo zvaanotaura muchinyorwa zvacho hazvisi zvishoma, ane zvibodzwa zvakabudirira seX.org kana odhiyo mune dzakawanda zviitiko.
Ndiri kureva, zvinoratidzika kwandiri kuti vanhu vakapfupika kwazvo, vakavharwa, chokwadi chiri nyore chekushoropodza mumwe munhu kana izvo zvavanonyora nekuda kwekuti vanoshandisa imwe sisitimu inoshanda, saka nekuda kwekuti ivo vanoshandisa OsX ndiwo maonero avo anoraswa? Zvinokunetsa here sooooo zvakanyanya kuti ini ndinoshandisa OsX uye kuratidza maonero pane SL? Vakwana machinda, zvakakwana, izvi hazvina musoro, saka vanozvidaidza kuti vadziviriri verusununguko, asi havaregi mumwe munhu akasununguka kuita sarudzo yakapusa senzira yekushandisa.
Kunyanya yako Sandy, huya, iwe hauna kudaro.
Ehm ... dzikisa mukomana ...
Ini ndinobvumirana naNano, vanhu vane rusununguko rwekushandisa uye kuyedza mashandiro avanoda uye icho hachisi chipingamupinyi chekurega kupa maonero pane chero OS Ko kana ndikada kuziva zvakadzama ndidzo nharo dzakaiswa naMetbybyte kutaura kuti OsX yakanga yakaipa kupfuura Ubuntu.
Iko hakuna, ini ndakangomuudza sekutamba, kuti kupera kwenyika kwaive kwauya kubva paakange ave kuita hunhu, uye tese tinoziva kuti aive murume akasvinura kusvika kurufu ..., uye akandipindura nemutsara XD
Ichokwadi here icho chinotaura nano, kune kwangu chikamu chinhu choga chandingati nditi pandev OsX? Une mhangura! hehehe
Muchokwadi, OSX inotorwa neFreeBSD asi imwe yevakomana vakaipa, saka maonero ako achiri akatakura huremu sezvazviri nepandev92 (ndinobvuma kuti ini ndinoshandisa yakaipisisa vhezheni yeWindows pane floppy disk kunzvenga zvisina basa matambudziko ekuvandudza uye a desktop yakaipa seWindows 8/7 iri, asi ini ndinoshandisawo Debian Stable kuitira kuti ndigone kutarira zviri kuitika muDebian world).
Ndinoona kuti kushamisira kune distro kuri kuramba kuchionekwa kune vazhinji vevashandisi, asi ini zvakare ndinomhanyira mukuwedzera kushivirira uye veteran vashandisi veGNU / Linux vanoziva chaizvo kutaura kwavo uye kuremekedza sarudzo dzevamwe.
Ndingadai ndaifarira kubata neMac, asi nekuda kwezvikonzero zvenguva nemari, ndaisakwanisa. Zvisinei, zvinoita sekunge iine zvinhu zvinoverengeka zvinogona kutorwa mukana kubva kune yekare FreeBSD, asi zvakadaro, GNU / Linux ndeyehunhu husinga pfuurike. Chinhu chega chinoshaikwa vashandisi vemahara software vanonzwisisa kuti paradigm yazvino yeyakajairika uye yazvino mushandisi haisi iyo koni, asi maGI uye mashandiro ezvishandiso.
wilbert isaac akadaro
Ichave yakafanana Nano kubva kuTira Ecol?
Pindura kuna Wilbert Isaac
Pane izvo zvandiri kupokana nazvo, kuti rusununguko rweSoftware rwuri pamusoro perusununguko rwekusarudza uye kutaura.
Mukuti ndinobvumirana newe. Uyezve, ini ndinofunga kushivirira kune vamwe vashandisi veSavo varidzi vanotya nekutanga kutaura kunozvidzikisira kwatorasika.
Ini handioni kuti zvakashata sei kushandisa zvimwe zvisiri-zvemahara nguva nenguva. Inogona kutouya inobatsira kuti ifemerwe uye kudzidza zvinhu kubva ku "muvengi" nekuona kuti zvese zviri musoftware zvinopfuura kupfuura mahara, pamwe nekuve nechinangwa.
Kana, semuenzaniso, ini ndikashanda pamwe nesimbi mumhanzi blog, ndinofanira kuzviona semunyengeri wekuteerera zvakare kumimhanzi yekuyedza, yechinyakare, jazi, nziyo, nezvimwe uye kwete simbi chete semusoro weblog?
Uye asi chinhu chimwe ndechekuti iwe unoteerera uye chimwe icho iwe chaunoseta imwe mhando yemumhanzi
Taliban maitiro = pa ????
Zvinoenderana nemaonero angu, isu tinofanirwa kuve nezvakawanda zvekutumira nezve mamwe maOS ePC pamwe nekuti pane zvakatumirwa nezveOS yemafoni, zvakanaka, zvinogara zvakanaka kuti uzive zviri kuitwa nevamwe.
Kune yangu chikamu OSX inofinha uye ndinoiona ichirema uye iine huwandu hwesoftware hwausingazogare uye kune vamwe kune avo vachiri kushandisa windows office uye kubhadhara kana kutsemuka. Uye pasina chikonzero chekutaura nezve mhando yezvigadzirwa zvavo izvo zuva rega rega zvinondishungurudza zvakanyanya, iyo yekupedzisira ndinoti nenheyo dzakajeka sezvo ndine mac maviri avanoshanda nawo mumba muno ekushandisa kwesainzi. Kujekesa zvinoita senge kwandiri yakanaka kwazvo posvo uye senguva dzose nekuda kwevashandi vako vebasa! Kwazisai Ariki
Pindura kune ariki
Ini ndinobvumirana pane mamwe mapoinzi, asi mamwe mapoinzi anoita kunge akapusa kwandiri. Kunyanya ini ndinobvumirana zvakanyanya nezwi mune linux.
Ndakaedza akawanda ekuparadzira, akasiyana masisitimu uye ndasvika pakufunga kuti avo vakaita pulseaudio vanofanirwa kutongwa mudare repasi rose rematsotsi nemhosva dzakanangana nevanhu.
Pindura kuna Thng
ahaha uye nemufananidzo wemupomeri wedare eheheh :) .., kana pulseaudio ichemera kudenga xdd ...
Ruzha harwunei nezvevatyairi zvakare? Ichokwadi ndechekuti ini handisati ndambove nematambudziko, asi nekuti mahedhifoni, masipika uye mimhanzi vatove neyakajairika mhando XD
pamwe kusanganiswa pakati pevatyairi uye nehurombo hwemhando pulseaudio = inouraya XD ...
Vanobvumirana zvachose nezwi. Icho chimwe chezvinhu zvishoma kwazvo zvandinosuwa kubva kune yangu yekare uye iri kure mawindows nguva, uye zvakanyanya kuve zvakadaro 'mumhanzi mudiwa' XD.
Neraki, parutivi rwakaipa kana "kwete-rwakanaka" harinzwike zvakanyanya, nekuda kwekuti ini ndine kadhi rine mutsindo rakaderera. Kunyangwe maererano nerekodhi uye zvimwe zvinhu zvinopfuura kuteerera, zvese zvakatosimba. Kuti uve muimbi muGNU / Linux unofanirwa kunge uri mainjiniya emakomputa panguva imwe chete xD.
Ini ndakabvumidza iyo posvo nekuti kunyangwe iri, ndiwo maonero emunyori pazvinhu zvinofanirwa kuvandudzwa muGNU / Linux. Asi, pane zvinhu zvakawanda zvandisinganzwisise:
1- Ini ndinoisa Debian paLaptop yandinoshanda nayo uye ini kashoma kuti ndive nematambudziko, ndiko kuti, ini ndinoisa uye kukanganwa nezvazvo. Pamwe dambudziko nderekuti munyori, anova pandev, anoshandura kugoverwa senge bhurugwa remukati 😀
2- Ichokwadi kuti ini ndinofarira kuti mashandisiro anotaridzika kunge akanaka, asi chokwadi chekuti odhiyo inoridza haina kunaka .. ichocho hachisi chikonzero, uye kune vazhinji vatambi, vese vari munzvimbo dzekuchengetedza uye munzvimbo dzechitatu bato .. wakavaedza vese?
Zviri nyore kwazvo uye zvakasununguka kushandisa Windows uye OS X, nekuti zvirokwazvo tese tinoziva kuti vane madhiraivha avo mune Windows uye mune OS X, ivo vanongotarisa kutsigira chaiyo Hardware.
Zano rangu: Shandisa ese Intel, matambudziko haawanzo kumuka ... Uye kana iwe uchida kutamba, wobva wasiya chikamu neWindows uye voila, kana zvirinani, tenga koni, iyo yakagadzirirwa izvo.
Pandev, gara zvakanaka paOS X .. Vashandisi veLinux vanoti hello.
Usatenda pamawindows ..., mumawindows ini ndanga ndine mamwe matambudziko nezwi kupfuura mu linux ine pulse, directsound, palaptop ine intel hda odhiyo, yakandipa misoro yakakwana. mhando yekurembera kuita ruzha senge:
WTF? uri kutaura nezvei? Ungakurudzira sei kushandisa windows mitambo? kana tichida linux kuvhura.
Iyi posvo ndeyechokwadi mune zvese. Tarisa uone anonyanya kukosha mafomu
(yakati wandei) yeanoshanda system Mutambi, Hofisi Suite, uye Mitambo. Izvi ndizvo zvinhu zvinokwezva vashandisi (Zvakajairika). Ini handizive kubva mumaonero angu.
Ndinofunga ari pachokwadi pane zvese. Uye ini zvakare ndinofunga haugamuchire kushoropodzwa. Ini ndinoshandisa Debian uye ndinofanira kutaura kuti ndizvo chaizvo mune zvese.
Pindura kuna Eriashi
Yakanaka kwazvo posvo. Ini ndinobvumirana newe mune zvese :). (Haisi kutsvinya hehe)
Kunyanya paWayland nePulseaudio.
Dark Purple akadaro
Ichokwadi ndechekuti, ndinofunga kuti tisati takumbira kuvhenekwa zvinoonekwa muLibreOffice isu tinofanirwa kutarisa kupora mashandiro ayo uye kuenderana neOOXML (uye yekupedzisira ndiyo kiyi kune vazhinji vashandisi kuishandisa, pane chero system).
Ini ndinobvumirana naPulseaudio, Wayland ingori nyaya yekumirira zvishoma kuti isvike… Uye ndiri kufara naClementine, chaizvo.
Pindura kune Rima Ruvara
Ini ndinoti LibreOffice inoenderana naM.Office inofanirwa kuenda kugehena (regerera iro izwi) Sei vachitsvaga kuenderana kana vachifanira kutsvaga kugadzira timu yeLibreOffice inofanirwa kuvandudza fomati yeODT kuti iite vashandisi vatsva veiyi hofisi suite kudanana iyo uye kutsiva M.Ofisi zvine mutsindo, kuti iyo doc, docx fomati kana chero Microsoft inoda kuidaidza mune ramangwana haina kuita zvishoma (shit, ndove, tsvina, nezvimwewo) pamberi peODT. Ivo veLibreOffice vanopambadza nguva yakawanda vachitsvaga kuenderana neMicrosoft suite pavanofanirwa kunge vachiifukidza nezvinhu zvitsva uye zvirinani pane zvainazvo uye vachisiya kuenderana kumashure, zvakakosha kuti ushandure LibreOffice ive KDE ichienzaniswa neWindows. uye OsX maficha. Zvakanaka ndiwo maonero angu anozvininipisa handizive kuti imi munofunga sei.
pandev92: wakaisa osx paPC here? Ini ndoda kuyedza, ndine niresh iso rakadzingwa asi handizive kana ndikariisa ndinogona kuchengeta iyo Windows partition uye kukwanisa kuishandisa ne dualboot. Kana ikangoiswa ini ndikaisa grub, ini ndinokwanisa kutanga nezvose here? Ndatenda
Hongu, asi ini handikwanise kukupa rutsigiro pane linux blog, zvinoita kunge zvine mutsindo kwandiri XD…, kana iwe ukashandisa google pane zvakanaka magwara ekuti ungazviisa sei kana iwe uine chaiyo Hardware.
Osx anokumbira iwe kuti ugovane mu gpt .., saka musimboti ndinofunga unorasikirwa nemawindows ..., ndokumbirawo ushandise google> ____ <, hapana akandibatsira uye ini ndakazviita.
Chakandinetsa nezve OSX ndechekuti iyo Aqua interface yakadya yakawanda vhidhiyo kupfuura Windows Aero pachayo, uye kunyangwe zvakadaro, vagadziri vacho vaisanyunyuta nezvazvo.
Kunyangwe zvakadaro, ndiri kunetsekana nekumisikidzwa kwakasimudzirwa nevamwe vevanyengeri vasingazive kuremekedza vamwe vashandisi vemamwe mapuratifomu kunze kweGNU / Linux vanotishanyira pano.
Kuombera compadre, uye ndeyekuti uyu mukomana mudiki inyanzvi, Mwari hapana nzira yekuvharidzira maposita ake? ivo vanamfundisi vanosemesa.
Wese akayambira haasi mutengesi, ini ndakutoyambira kare.
HAhahaha akura akura mukomana.
🙂 Hongu, asi shandisa nyaya yacho, nekuti kutsikwa kwako kwakashata kudarika kunhuwa. Guess Ndinofungidzira iwe unofanirwa kunge uri pakati pemakore gumi nemaviri uye gumi nematatu uye kuve fap fap zuva rese pamberi pc.
Ndeipi kutsika? chii? Zvino kutsika kuri kukuudza chokwadi chako? une maonero akasiyana neako? Huya, nenzira, zvaunofunga hazvi pfuure kune imwe nyika puber uyo ari kushandisa komputa kekutanga, asi chokwadika iwe uri mushonga wecomputer handiti? hahahaha, ngatione kana iwe uchidzidza kunyora zvinyorwa sevamwe vanyori pane ino saiti, kutanga nevekuti ivo vakadzidziswa uye vakuru maitiro.
Ukaenderera mberi, unondiitira chinhu chikuru kuti ndirambidzwe, unoenderera.
Hahaha uye sei vachizondirambidza mukomana? yekukuudza chokwadi? Zvisinei, izvo zvavanofanira kuita kukudzivirira iwe kubva kunyora zvisina musoro zvirevo, zvakajairika zvemwana asinganzwisisike.
Ivo vachakurambidza iwe nekushatirisa, kunetsekana, uchitenda kuti iwe une chokwadi chizere, kutadza nevapepeti kakawanda, mushure mezvose, uye muchidimbu, trolling staff :). Ndiri kuzosarudza kukuregeredza kusvikira warambidzwa. 🙂
Chaizvoizvo handizive kuti sei ndiri kukupindura, kana ako ese "mapositi" (kana achigona kunzi akadaro) uye makomendi ako ari puerile, pasina nharo uye zvakati wandei mupiro, ini handizive kuti sei uchiita sainjiniya ane doctorate kubva kuMIT apo Iwe unongoratidzira kutsamwa kwako semwana akaparadzwa, unonyadzisa vamwe.
Mbavha inogara ichitenda kuti munhu wese anechimiro chake 😀
Sayenzi yakaratidza kuti uri mwana.
zvakafanana ndinoti, SIR
JAjajaj yayaya iwe ndiwe murume wembatatisi uye nenzira yaunoziva matauriro echirungu, rudzii rwecapo, muchidimbu ndinovimba wakaverenga zvinhu zvakanyatsonaka kuti iwe uedze kudzidza chimwe chinhu muhupenyu, kusvika zvisati zvaitika.
Enderera nesekisi yandinakidzwa nayo 😀
Inguva yeTroll !!!
Zvinotaridza kwandiri kuti vanogona kusiya nyaya yacho kare. Sezvandinogara ndichitaura, buda undozvigadzirisa nemaHangouts, Yahoo Messenger ... kana zvakafanana. Ndapota.
Zvakanaka ndine urombo @elav asi ini handiwedzere vana mu gmail kana chero chinhu chakadai, zvakaringana kwandiri kuti vamwe vatambi vasiye kutamba sezvinoita murume uyu, mune zvese zvinyorwa zvisingataure "windows ndiyo yakanakisa, ballmer ndiye muporofita uye magedhi ebhiri ndimwari.
Sekukumbirwa kwandinoitwa kuti ndiremekedze vanhu kana ndikataura chimwe chinhu kwavari, ndinokumbira kuti ndiremekedzwe nevanhu ava, vanotenda kuti vane chokwadi chizere uye vanotenda kuti vane kodzero yekukanganisa maonero evamwe.
Thanks @elav nekubvumira kunyangwe kutsika-tsika kupfuura muylinux.
Nekuremekedza kwese kwakakodzera, Elav, shamwari yako mukomana mudiki anozvitenda anozvitenda kuti ndiwo mushonga wekomputa, ndinofunga amai vake vane mhosva yekuti anotendwa kwazvo, handizive kuti nei vachirega mwana uyu nyora zvake whims uye zvakapusa zvinonetesa zvakanyanya verenga akadaro asina hushamwari mukomana, kwaziso.
Uye sezvo kurwa kwejongwe uku kusingamire kusvikira mumwe wedu afa, ndinosarudza kurwira uku kuitwe mumunda mawakagadzirirwa: maforamu. Zvirinani iro peji harina kugutsika kana uchipindura uye yega meseji inogona kutaurwa zviri nyore pane kunyora blockquote mune zvakataurwa neiyi blog yakaitwa muWordPress (uye iwe unofanirwa zvakare kunzwisisa kuti WordPress haina kunyanyisa kutsvagisa iyi mhando yedata senge Drupal, saka funga nezvemaAdmin).
Ehe saizvozvo, sekutaura kunoita maradona kwauri, "kuti urambe uchimuyamwa." cocolio
Pffta mwana, handinyatso kuziva kuti ungazvigone sei, kusvetwa sei ……
Ehe saizvozvo, sekutaura kwaMaradona kwauri, "kuti urambe uchimuyamwa." cocolio
Hahahaha izvozvi, ini ndichakupindura neimwe kubva kuMaraCona inofamba zvakanaka newe
UNE IYO PASI !!!!!
kechitatu: ehe saizvozvo, sekutaura kwaMaradona kwauri, "kuti urambe uchimuyamwa. cocolio
ona kana iwe uchida kuve nezvose zviri nyore kuisa Linux Mint neCinnamon kana Mate uye voila, asi shandisa Apple .. Ndokumbirawo, kuti uverenge uye pamusoro nezvikonzero zvataurwa .. 🙂
Hapana pandati nditi dambudziko rangu nderekuti zvese zviri nyore, ndataura nezvematekinoroji (vhidhiyo uye odhiyo), uye chitarisiko (mumhanzi mutambi).
Kune nyore distros ini ndinokurudzira iyo nyowani yakadzika linux.
Uye kwete, handisi kushandisa apuro nekuda kwematambudziko aya, ndiri kuishandisa nekuti ndinoda kutamba uye ndinoramba kuisa windows kutamba fomula 1 uye cal yebasa.
Kana mazororo angu apera ndinoshandisa arch senguva dzose.
Zvakanaka, tsime: D .. Zvakadaro ini ndinofunga kuti hauchapedza mwedzi miviri neApple sezvo zvaisingakwanise zvichakushamisa: D .. Nakidzwa nemhumhi mitambo uye yeuka kuti neWine, Playonlinux neSteam unogona zvakare kutamba 🙂
Ini ndoda Steam pane kuchema pamusoro pekukanganisa Waini inondipa. Chero zvazvingaitika, ini ndichiri kushandisa Windows kuti ndikwanise kuita basa rangu nepropetiary software (CorelDraw, Illustrator, Dreamweaver ...), asi ndingadai ndakada kudzidziswa Krita, GIMP, Inkscape, Bluefish, uye mamwe akawanda mahara dhizaini. zvirongwa, asi zvinosuwisa muPeru ivo vakadzika midzi mupropathiary software.
Linuxero yakaenda kuMac?
Kumukira kwakakwirira !!! batidza mwenje, kuvhima kunotanga !!! ¬_¬
uye uzvinyore kubva kune mac XDDD .., mac mini AHHAHAHAHAHA
Manu Rincon akadaro
Ndiri kutya kuti kutaura kwacho kwaishamisa 🙂
Pindura Manu Rincón
Ini ndanga ndatozviona xD pandakapindura, hapana chekutya.
[kutsvinya] Tiriwo akaisirwa lackeys aSteve Ballmer? Sezvo ini ndichishandisa Windows Vista [/ sarcasm].
Ini handibvume zvakanyanya nezvevatambi, VLC ndiyo yakanyanya kunaka pane aripo. Nezve nhaurirano pakati pevashandisi kungoshandisa akasiyana distros kana DE, pane dambudziko rakakura kwazvo muLinux: kupatsanurwa, asi kwevashandisi, chikamu chakakura pachinzvimbo chekupa kunharaunda nemazano kana kubatsira chete kuzvipira kuzvikurukura mune yakachena fanboy maitiro pamusoro peiyo distro, chirongwa chekuita X basa kana DE chiri nani, fanboy yakawanda sei yeKDE, Debian, Archlinux, Ubuntu, nezvimwe hazvina kumboonekwa pano kana dzimwe nzvimbo nechinangwa chekukanda sh * t kune vamwe nekuti (kupa muenzaniso) Archlinux X mushandisi anonzwa achikwirira kune vashandisi veUbuntu nekuti kuisirwa uye kushandisa kwavo distro kunoda rumwe ruzivo rwakawedzerwa.
VLC ndiyo yandinofarira media player. Ini ndinoishandisa pane ese Windows uye GNU / Linux, uye ndiyo yandinoshandisa kuona chero vhidhiyo mune fomati yandinofanira kuvhura. Zvakare, ine iyo yekutamba sarudzo iyo iri chaiyo yakanaka.
vlc ndiyo yega ine mutsindo vhidhiyo inoridza osx, yekuteerera ini handizvide zvachose asi.
Kana iwe uine mari yekutenga Mac, ini handioni dambudziko hombe ... ngatione kuti zvinofamba sei nezvirambidzo, nekuti Apple ndiyo nzira yayo ... kana hapana!
Kunyanya kutaura nezvemahara software uye nekurumbidza chimwe chinhu chisiri pamutemo zvachose, uye nekudaro chisina hunhu. Iko hakuna chimwe chinopesana nesoftware yemahara kupfuura izvo zvisina hunhu.
Kuombera maoko kuombera
Uye iwe urikuona kupi kuti ini ndakurudzira kuti iwe ukwire hackintosh? nekuti ini handizvione.
Ini ndanga ndichireva kune zvakataurwa nano, asi pamwe ini handina kuzvinzwisisa.
ahh ok, tarisa, nano yango taura kuti ndinoshandisa hackintosh XD
Ini ndaifunga yaive yakakosha, xD nekuti yapfuura komendi yakataura nezve izvo zvinodhura zvemahara. ndine hurombo
Hmm hongu, ndanga ndichitaura nezvake ... isu tinongova nevamwe vakanaka mapenzi avo vanofarira kupindura nekuda kwekuzviita ... funga kuti ndanga ndichipotsa zvimwe zvinhu zvakajeka.
Hackintosh seyakadai haifanire kunge iri pamutemo chero bedzi iwe uchitenga iyo sisitimu yekushandisa uye kuiisa paPC, handina chokwadi nazvo asi handifunge kuti pane rezinesi rinokurambidza kuisa OsX pane chero chinhu kunze kweMac.
Hongu @nano, kunyange ichi chiri chikamu cheapuro rezinesi, saka rezinesi iri rinoshanda kune dzimwe nyika hongu uye kune vamwe kwete kutyora mitemo yepamusoro.
Zvinofanira kuyeukwa kuti EULA, yakavakirwa pamitemo yeUS uye chikamu chikuru, haisi pamutemo muEurope (kunze kweGerman….)
Pano iwe unogona kutenga zviri pamutemo hackintosh! uye vanga vachitengesa kuEurope kweanopfuura makore mashanu 🙂
Izvo hazvisi pamutemo chete muUnited States uye nedzimwe nyika shoma.
Uye sezvo isu tiri, marezinesi emaapuro haanyatsoita hunhu ...
Ini ndaishandisa OSX kwemavhiki mashoma nekuda kwezvikonzero zvebasa (technical technical) ivo vakandiburitsa kunze nekukurumidza kune "mubvunzo" hahaha.
Aesthetics hunhu hwayo hwakanakisa kwandiri, uye mamwe mashandiro mukutungamira kwedesktop yayo (mhedzisiro, mapfupi, nezvimwewo) asi Hardware yayo inogumira pamubhadharo / bhenefiti iyo inounza sezvo system ichikara pachayo.
Ini ndinofanirwa kuisa yakawanda RAM kuti ndione kana mamwe mabasa anorema, izvi kuMacbook, iMac uye macmini, kuti ndikwanise kuishandisa zvakajairika. Yayo Hardware ishoma kwazvo, yakavharwa chaizvo, neiyo yakanaka Ndakanga ndine tsaona uye ini ndakatamba kudzamara iyo system yese yagadziriswa (mashandiro ekudzosera iyo system mufananidzo, iri mune imwe yezvikamu zvayo).
Mhedziso haindibvumidze, kana sisitimu kana neuzivi, neyakagamuchirwa mvumo giredhi. Musikana wepurasitiki chero paunomuona. Asi pane chimwe chinhu kune wese munhu.
nezve Hardware hapana chekubvunza, ichokwadi, zvichave makore vasati vandiona ndichitenga chinhu XD
Ini ndinokusiira iwe chidimbu chebvunzurudzo muna 1998 neMuvambi we KDE
Nezve Gnome: Sezvo zvese zvinotaurwa neveKDE mugadziri nezveGnome mune veruzhinji zvichidudzirwa senge kubhowa, ini ndinofanira kunge ndakanyarara. Chero zvazviri, hapana chakafanana neGnome / KDE hondo, zvirinani kwete pakati pevanogadzira. Vagadziri vanowanzoremekedza munhu wese, uyo anonyatso svibisa maoko ake uye anonyora kodhi yekodhi. Chero zvazviri, hondo dzemurazvo dzakandiita kuti ndinyanye kusuruvara, ndichiparadza kutenda kwangu kuti pane zviriko kana chimwe chinhu senge linux-nharaunda. Haisi KDE chete, ndizvo zvese. Zivisa semuenzaniso kuti iwe wakanyora nyowani meseji. Vanhu vachakumisira moto iwe zvausina kunatsiridza emacs pachinzvimbo. Vamwe vachatanga kupokana kuti vi ine maitiro akafanana uye pano toenda. Wakamboverenga here kutumira kubva kune emacs kana vim mushambadzi uchirova imwe yacho? Kana kuzivisa kuti iwe wakanyora LaTeX kumberi. Vanhu vachakumisira moto kuti yavo yazvino nzira yekunyora TeX iri nani, ine simba, yakawanda unix-yakafanana, nezvimwe. Sei? Vazhinji vashandisi ve linux kunze uko vanoita kunge vanotenda kuti vanyori vemahara software vanoda kuvamanikidza kuti vashandise izvo zvitsva zvinhu chete. Hazvina maturo. Kana iwe uchida imwe software, ishandise, kana zvisiri, shandisa chimwe chinhu. Sei izvi zvakaoma kunzwisisa kune vazhinji linux mafeni? Handina zano. Chero zvazviri, zviri kuwedzera zvishoma, saka pane imwe tariro. Mazuva ano vanhu vanogona kutobvunza mibvunzo yehunyanzvi nezve KDE mune yakajairwa linux newsgroup uye tora, zvakanaka, mhinduro yehunyanzvi pane kupisa. Ini pachangu, ini handiverengi linux mapoka emapepa zvakare. Kukura chaiko kana rutsigiro rwevashandisi kunoitika mune tsamba yekutumira iyo inopa iri nani chiratidzo / ruzha chiyero.
Kubva 98 kusvika nhasi uno chiitiko chakachinja zvakanyanya, uye vanogadzira KDE, kana zvirinani zveQt, vava nemhando yepamusoro kubva makore mashoma ikozvino. Ichokwadi kuti zvinhu zvachinja uye ZVINONYANYAURWA zvevagadziri vegtk zvinogona kunge zvichishanda, asi nhasi, kunyangwe isiri hondo, vazhinji vevanogadzira gtk vekunze vanoita rant zvakanyanya kupokana negtk.
Linux haina zvakawanda asi ini ndichiri kuishandisa
Linux ndeyemaseva ndosaka kutadza kweDesktop
Linux ndiyo musimboti weiyo system, uye kune zvakagoverwa zvinotungamirwa kumaseva uyezve kune desktop (iyo inovengwa Ubuntu semuenzaniso). Zvinenge zvese zvaitwa muLinux nekutenda kubatana kwezviuru zvevashandisi venharaunda, uye chero munhu anogona kupa, saka pane kunyunyuta, zvaunofanira kuita kuedza kuzvigadzirisa (uye haufanire kunge uri programmer, unogona shandira pamwe nenzira churu, semuenzaniso nekusiya chipo kana kusiya "mazano" aya pawebhusaiti yeprojekiti). Hongu, Linux inogona kuvandudzwa, asi mhinduro haisi yekuvaisa yakasvibira kana kutaura kuti zvese kubva paWindows neMac zvirinani (izvo zvinotorwa sezvisina basa, zvikasadaro vangadai vasina kubhadharwa uye zvakanyanya kudhura zvakanyanya).
Uye muchinyorwa ichi ini handina kuvasvibisa, dai ndaida kukora Linux, ndingadai ndakatora zvimwe zvinhu zvandaisada kutaura nezvazvo nekuti hazvina basa.
OS X ndiyo tsvina yakaipisisa yandakaona kubva kure, ini handitombofarire kufona kwayo, iri "slutty", kwete mumamiriro ekuzvidza, asi ichokwadi, ini ndakave neMBP uye anga ari mazuva mashanu akaipa yehupenyu hwangu, ipapo ini ndakaisa OS X mune yechipiri Lappie yandinayo kunze uko (kana hackintosh) ine hunhu hwakafanana neiyo MBP yenguva yayo, ndinoti kanenge nekuti iko kuri nani chaizvo hahaha, uye zvakanaka izvo zvakashata Inoshanda sisitimu yandakabvisa uye ikozvino yave neWindows 8 uye yakanaka kunyangwe hazvo iyo bullshit inongoziva 256 yevhidhiyo ndangariro panzvimbo ye512, asi hei, iri yechipiri lappie.
Asi zvaunotaura nezvevatambi nekuti iTunes ndiyo yakaipa nekuti ndaida ipapo, zvakanyanya nekuda kwechirongwa ichocho uye zvimwe ndezvekuti ndinovenga Apple asi hei ndinofanira kunge ndakaisirwa kuti ndishandise maPhones angu, chero zvakadaro Winamp chiuru nguva dzinodiwa, dzakareruka uye dzinobatsira kupfuura chinhu icho, muLinux ndinorangarira ndichishandisa Teerera zvakanyanya, zvakanaka kwazvo kunyangwe hazvo sekuti ese Linux prog yaive mune beta uye yakarova zvakashata, ndinovimba vakagadzirisa dambudziko iro.
Asi iyo ndiyo pembedzo yako kune madhiraivha uye odhiyo nekuti ini handitende zvachose, ndinovimba unokwanisa kujekesa zvimwe pachikamu icho, nekuti kurekodha ruzha hakuna kumbobvira kwave dambudziko kubva paWindows 3.1 hahahaha uye zvisina basa kutaura kuita dzidziso nezvimwe.
Chaizvoizvo ini handioni chikonzero chekuisa iyo OS, kana yekutamba, zvakanyanya kana kuti izvo zvakanaka, asi zvakanaka mumwe nemumwe nenyaya yake, handiti? Ini ndinenge ndiine Windows yakaiswa pamachini angu ese, ndine piritsi ine Android, 2 iPhones uye mamwe mafoni ane Android, uye ndinogona kutenga imwe yeaya maPC madiki neApple sezvo vachindibata, saka handisi fanboy, ini ndinoita Windows chiuru pane desktop uye Linux pane maseva, kunyangwe ivo vachiri musoro kuhahaha, kwaziso.
zvakanaka kwazvo, isu tatoziva kuti iwe unoda windows, makorokoto, ini handingashandise windows 8 kana kupihwa (uye kuti ini ndichine marezinesi angu ekutanga nekuda kwechirongwa chevagadziri cheMicrosoft). Kana uchifara wakanyanya.
Uye sezvo ini ndisina chishuwo chekukanda nhamo nekuti ini ndakuziva kare, uko ndinokusiya iwe.
Hapana chinhu chiri munyika chine njodzi sekusaziva kwechokwadi uye nehana yeupenzi.
Ahhh chaiko iwe uri mumwe weakanyanya komputa connoisseurs kunze uko, iwe uchandiregerera hahahahaha, ini handizotaure pane ako mapositi zvakare, nechikonzero chimwe chete ichocho, ndinokuziva. (ndatenda nekundiyeuchidza)
+1 runyararo uye republic.
uchifunga kuti nharaunda yehintintosh inharaunda inoshanda pasi pemweya wekuvhura uye kuti zita risingazivikanwe rinotora basa revamwe kuti riiswe muzvirongwa zvavo pasina kuburitsa kodhi yekodhi, uye zvakare rinoita mari nehurdware inoonekwa ipapo, iyi link ini haifanire kutomboonekwa kutenderera pano.
Pffta Ini handizive chaizvo kuti ungazvibata sei iwe compadre …….
Ini handitomboziva kuti anozviita sei, asi achiri kunyunyuta.
Elio handifunge kuti chero munhu anoziva, asi hei chii chakaomarara dude iye, anowanzoita Apple fanboy.
Sezvineiwo, zvirokwazvo iwe hauzive kutsvedza zvinhu pamwe nealsa, pulseaudio, zvigadziriso zvigadziriso zvemutambo wega wega zvaunogona kutenga zviri nyore kuburikidza neSteam yeUbuntu Mint uye uone kana kadhi revhidhiyo kana mutyairi wayo achishanda nemazvo neOpenGL ( muOSX chinenge chinhu chose chinogadziriswa nehurema hwesoftware hwamunoisa, asi muGNU / Linux, BSD uye zvigadzirwa, chinhu ichocho chinofanira kunyatsogadziriswa, uye zvimwe kana zvichibva kuNVIDIA neATI / AMD izvo zvisingadi kupa rutsigiro rwuri nani GNU / Linux).
Uyezve, Debian Stable inoita kwandiri kunge iri nyore kubata neGNOME 3.4 kudonha pane OSX ine yayo Aqua interface.
Ichokwadi ndechekuti kwandiri chinonyanya kugadzikana uye chakanakisa chinongedzo chandakashandisa ndiGnome, yakagadzirirwa ne compiz uye emerald makanda runako, mitambo yacho zvakanaka neWINE hapasisina, aiwa? Kunyangwe minesweeper nemitambo yakafanana zvinondivaraidza zvakanyanya.
Zvakanaka, ndinosarudza Steam ndisati ndaneta neGNU uye Tetris minesweepers.
Ndakaedza OpenBSD uye chokwadi ndechekuti ichokwadi chakafanana nzvimbo pakati peGNU / Linux neUNIX. Ngatione kana rimwe remazuva aya ini ndotora download Solaris kuburikidza neiyo Oracle saiti uye ndokupa kuravira.
Kana zviri zveWindows, ndinogona kutaura kuti inoshandiswa neruzhinji rwevashandisi vePC kubvira Microsoft ichimanikidza vagadziri kuiisa kana ivo "vacharasikirwa nemari yavo" (Isu rakagadzirwa naJohn D. Rockefeller akanyorera M $), asi zvishoma Zvakaipisisa Cannonical iri kuchinja iyo paradigm neUbuntu (kunyangwe isiri iyo yakanakisa pane ese ma distros, ndiyo inonyanya kuzivikanwa pane ese).
Ini ndinobvuma zvachose kuti iwe unoshandisa OS X sezvo iri yako sarudzo.
Ini handikwanise kutaura pamusoro pechinhu chekutanga nekuti ini handinyore mumavara ekumabvazuva, asi panofanirwa kuve nemhinduro.
Pfungwa yechipiri haina kundibata, ini ndinongoshandisa mutambi kuteerera mimhanzi yandinayo pane hard disk, ndiri nyore kwazvo. Imwe nguva yapfuura ndakaedza imwe inonzi Musique yaive yakanaka kwazvo kunyangwe yaive isina huwandu hwesarudzo dzaunotaura
Zvinoita sekunge kwandiri kuti iyo Libreoffice interface inoda chinongedzo chinja, asi zvakanyanya kukosha kugadzirisa mashandiro (izvo zvandakaona zvakavandudza zvakanyanya munguva pfupi yapfuura) uye kuenderana.
Kana iri Wayland uye kurira paLinux, ndinobvumirana zvakasimba; Ini ndaive nani kushandisa Pulseaudio uye ini ndinobva ndananga ku ALSA.
aaahh ini ndatoverenga ese makomendi uye ndoziva kuti pandev haina macopper hehe, iribho mudhara, ndinofunga unotora osX seimwezve distro, uye kana ikakubatsira pane zvaunoda panguva ino hazvisi sarudzo yako yakaipa. Uye nei ndichinyora kubva kukomputa yangu yebasa, ok!
ehehe chaiyo XD
uff kune yangu iTunes ini ndinoiona ichinyangadza zvese maererano nekushandisa uye nekuda kwekuwandisa mashandiro. zvirokwazvo handina kuwana kana mumwechete mumhanzi mutambi mu linux iyo yandinonzwa 100% kugadzikana (ndine urombo ini ndiri mukomana wechikomana). Uye tarisai, ndinofanira kunge ndakaedza vanopfuura makumi maviri.
Zvisinei, iyo interface iri yakawanda kana kushoma yakanaka haina basa nekuti ini ndinogara ndichiita kuti ideredzwe pandinenge ndichishanda, kutarisa, kutamba kana chero chinhu.
nyama yakafa yakanaka, uye ine kunyange yakaenzana saiyo foobar (SuperEQ) asi haina muongorori wefaira sekudya. audacious yakanaka kwazvo pazvese asi iyo yakaenzana inoita senge isipo, amarok inondidya 500mb yegondohwe kungotanga nezvimwewo etc.
Kana zviri zvemitambo ini zviri pachena: windows partition nechero ini chandinotamba panguva iyoyo uye nechimwe chikumbiro icho chandisingawani chinotsiviwa chakakodzera mu debian uye kumhanya 🙂
Amarok zvine nharo iTunes kubva kuGNU / Linux (kubva KDE kuti inyatsoita). NaA Audacious, ini handina dambudziko, sezvo iine hwaro hweyekuteerera, asi haina kuenzanisa nekukura kwakaita VLC Media Player.
Pakudya, izvi zvinopedza pc yangu
Hapana kana chinhu.
Hahahahaha zvakanyanya? uye pasina? weinamp pane desktop yangu PC iri pa8 megabytes, uye palaptop yangu inosvika inosvika makumi mashanu neshanu megabyte nekuti izere nenziyo zhinji hahahahahahaha, hurray yeTunes !!!!
Akange asiri kutaura nezve iTunes, aitaura nezve cpu, ndangariro, sekunge dai aida kudya mazana mashanu emamabyte.
uye winamp ndiye mutambi akashata wandati ndamboona, midhiya monkey iri nani kune windows.
JAjajajaja asi iwe une mukana wekuchinja makanda, isa maDSP, wedzera zvakaenzana, vanoona uye yakareba etcetera uye kurodha kwako kunorema chete 16 megabytes zvakanyanya, kune rimwe divi iTunes 90 megabytes? Ini ndanga ndatokanganwa asi kunoendako handiti? Uye kuisa zvese izvo zvinhu (DSP, makanda, nezvimwewo) tisingataure, iTunes uye iyo yese Apple interface chinhu chaicho chinosemesa, chakanyanyisa uye chisina mwana.
Winamp inotyisa, ayo aesthetics ari "echinyakare" (kana iwe uchikwanisa kutaura izvozvo) uye pandakaishandisa teeeeeeeeempo yapfuura yakandipa zvikanganiso zvakawanda senge zvakarembera, hapana ruzha kana zvinhu zvakadaro, chinhu chega chandinoziva ndechekuti mumakomputa zvekare zvinoita basa razvo nemazvo (kwete kuverenga zvikanganiso izvo dzimwe nguva chirongwa chaipa) asi kwemakore handina kuona komputa ine isingasviki 2GB ye RAM.
Zvirinani neWinamp iwe une mukana wekugona kuenzanisa nziyo dzako nemidziyo yeApple nenzira yakasununguka, kuwedzera kune chokwadi chekuti kunyangwe yazvino default interface inonzi Bento inosemesa kune vakawanda (mumaonero angu kwaive kumeso kune interface «Classic» uye «Yemazuva ano»), unogona kutarisa webhusaiti yepamutemo kuti ugone kusarudza makanda ayo anotevedzera iTunes (ndakazviedza, uye ndinogona kutaura kuti iTunes yeWindows inoshandisa zviwanikwa zvakawanda kupfuura zvinoshandisa Winamp. ine "Yemazuva ano ganda").
Sezvo yeshanduro 3, vazhinji vakarega kushandisa Winamp nekuda kwekukanganisa kwakawanda, saka vakafunga kununura maficha eiyo vhezheni 1 ne2 uye vozvibatanidza mushanduro 3, vobva vaburitsa vhezheni yechishanu (iyo yazvino vhezheni iri 5 X uye yakawanda yakagadzikana kupfuura pakutanga uye ivo vakamisa kuburitsa kuburitsa kwaitove kunetsa zvakakwana).
Iyo vhezheni iyo pachayo ndeyekuchema pairi ndiyo vhezheni yavakaburitsa yeOSX, iyo inonyatsoenderana zvachose neTunes kuti ikwanise kuwiriranisa zvinyorwa zvako uye nziyo kuApple yako, uye haina kukupa iwe mukana wekufarira Shoutcast seyako mubatsiri weWindows.
Ndiyo iyo vhezheni ye osx ... iri jee, vakaiburitsa nekuti vaive nenguva yemahara, asi chero mutambi ari nani pane izvo.
Nezve kuwiriranisa kweiyo android .., hazvo hazvisi zvekuti ini ndine hanya zvakanyanya nezvechokwadi, handifunge kuti ndichazombotenga imwe.
Ichokwadi ndechekuti ini ndaive nenguva shoma yekuishandisa pane yangu hackintosh, hazvo chaizvo, haina kana kubatidza iyo laptop nekuti iyo imwechete OS haina basa, asi pachokwadi izvo zvinoita seni kuve nebhenefiti zviri kunyanya mufaira system yeiyo imwecheteyo (yekutsvaga nziyo), uye iko ndiko kubatsirwa kwekuti * nix pamusoro peWindows, NTFS, kunyangwe zviite sei, zviri kumashure kune vamwe, asi kubva ipapo… iTunes haisi zvachose sekuda kwangu, kunyanya yazvino vhezheni, iri kuramba ichinetsa uye ichinetsa, muWinamp ndinongodhonza kana kudzvanya shift + pinda kuitira kuti nziyo dziwedzerwe kuimba yekutamba, chirongwa chimwe chete chinondinyorera nziyo idzi kana vasina zita chinhu icho iTunes chinoda kuti nziyo dzakaverengerwa nechirongwa ichi uye iri refu nezvimwewo izvo…. zvakanaka KWANGU zviri crap.
Chero zvazvingaitika, kune windows ini ndinokurudzira zvikuru foobar, ine ruzha rwakanakisa (rwunoratidzwa nehydrogenaudio ..), uye iro risinganzwisisike rakanaka ganda kunze uko, uyezve ndinofunga isoftware yemahara.
@Elio handizive kuti sei wakandikurudzira ganda rakafanana neTunes, ndinovenga zvinhu pachivharo, uye handina basa nekuenderana, ndiri mumwe weavo vanoshandisa mutambi kutamba chete (yakakosha iyo redundancy ), iyo Android Winamp Ini ndinoiwanawo inotyisa, ini ndinoda iyo inouya nekumira.
Ini ndakangoita zano rematehwe eWinamp. Zvisinei, Winamp ndiye mutambi wandinoshandisa kuitisa audiostreaming iyo SHOUTCast inopa uye kugadzira yangu pachangu playlists uye kuwiriranisa navo yangu Android smartphone nemaalbum. Zvisinei, Winamp yakavandudza zvakanyanya, asi ini ndinofanira kutaura kuti muOSX inofanira kunge iine mabasa akafanana neayo anopokana neWindows.
Paul N. akadaro
Ngatione, ngatiendei muzvikamu
Chinhu chekutanga ndechekuti kana iwe uchida kushandisa Windows, kana Mac, kana iyo sisitimu yekushandisa yaunoda, chisarudzo chako, chinoshanda uye chinoremekedzwa. Nekudaro, handifunge kuti unoti, mushure mekunyora zvinyorwa zveLinux pane saiti yakanangana nevashandisi veLinux, "Hei, Linux yakawedzera kune ichi uye chikonzero" kubva kune imwe sisitimu inoshanda. Iva chikamu chemhinduro kwete yedambudziko.
Yechipiri inoenderana nezviri mukati mechinyorwa chako. Ichokwadi kuti Linux haina iyo looooong nzira yekufungidzirwa yakanaka. Zvisinei, kufambira mberi kwakaitwa. Uye zvakawanda. Ndanga ndichishandisa Ubuntu kwemakore manomwe, uye shanduko dzave zhinji. Handina kumbofungidzira kuti ndinogona kuve neSteam, nemitambo yemuno yeLinux, pandakatanga kuishandisa. Pakutanga ndaive nematambudziko nezvese zvinhu, nharaunda yaive ichidonha, ndaisakwanisa kutamba chinyararire uye kubatanidza kune internet kwaive kwakaoma. Kana iwe ukaita enzaniso, zvako zvazvino zvirevo HAZVI CHINHU.
Ini handisi kureva kuti iwe unofuratidzira uye nekuregeredza matambudziko anounzwa, kuti anoshanda uye kuti ndeechokwadi. Asi zvakare funga kuti wakasvika sei uye nekuziva shanduko.
Chekupedzisira, yako posvo inoita senge yakajairika. Iwe unoti 'linux yakaipa, ine zvinhu izvi zvakaipa. Ini ndakachinjira kuOSX, inoshanda zvirinani ASI LINUX INONYANYA ». Kana iwe uchidaro, ini ndinotora mazwi, "GNU / Linux iri pamusoro zvakanyanya", sei usina kuramba?
Pindura Pablo N.
Chinhu chekutanga ndechekuti ini ndichiri kuona zvichisekesa kuti vanhu havanyatso kuongorora zvaunonyora vosiya mataundi matatu kana mana ezvaida kutaurwa nemunhu. Chikamu nechikamu:
1- Hazvina basa kuti uzive izvo zvatove zvakanaka, nekuti izvo zvatove zvakanaka, chakakosha kuona chakashata uye nekuziva kuti chinofanira kuchinjwa sezvo ivo vari akakosha usability zvinhu. Dai ndaida kukwevera zvisirizvo kuLinux, ndingadai ndakataura nezvezvimwe zvinhu zvandaisatomboda kubata, nekuti zvaive zvisina kuvaka zvachose-
2- Zvakwana kuva vanowirirana vanhu.
3- Kwete, handina kuti Linux haina kunaka, ndati izvo zvinhu muLinux zvisirizvo :). Hazvina kufanana kuti Spain yakaipa, pane kutaura kuti guta kuSpain rakashata.
4- Ini ndinofunga ndataura zvakajeka kuti ndiri kutamba kudaidzwa kwebasa dema ops, fomula 1 2012 uye Counter stereki yepasirose inogumbura uye ndosaka ndiri pa mac osx ...
5- Chaizvoizvo ndaneta nevanhu vanoverenga zvakakomba zvinyorwa, zvine huturu pameno avo.
Conformists? conformism iri kutarisira kurumbidzwa nekushandisa iyo sisitimu, kuenderana ndiko kuti, ini handikwanise nemadhiraivha odhiyo uye ndinodawo kutamba mimwe mitambo mishoma ...... uye ndosaka ndichichinjira kuOS X nekuti ndinovenga Windows, kana iko iko zvako posvo inofanirwa kunge iri: Maitiro ekuisa mitambo paLinux neSteam, PlayOnLinux, Waini kana chimwe chinhu senge Crossover (iyo inobhadharwa uye ini ndaishandisa icho), uye imwe posvo iyo yaunoratidza matambudziko aunotarisana nawo nemadhiraivha ezwi, ayo aungave uine yakawanda mhinduro (mhinduro) nevashandisi veLinux.
Hauna kutaura here kuti hauchanyora zvimwe? 🙂
HAhaha zvirinani kwete mune ako maposta, asi hei ndeyekuti munhu haagone kumira kushuva tsvimbo, uye iwe warasika mwana, hunhu hwako ndohwemwana ari pasi pemakore gumi nemashanu ekuberekwa uye akawandisa, pamusoro pazvo hauna iwe pachako unopokana nazvo, unotaura zvakaipa nezvemumwe munhu "anoshandisa kodhi yemahara" asi zvisinei unoshandisa sisitimu yekushandisa iyo isingangoshandisa software yemahara asi kunze kwekungoburitsa chete dhamu re software yavo inoda kukodzera zvimwe zvinhu, ini usarangarira kuti zvikamu zveHTML 15 zvinonzi ndezve (semazuva ese) "yavo" uye "zvakanaka", "kambani" haisisipo.
Huya, chirega kuva wakadaro, kana 92 ​​iri yegore rako rekuzvarwa saka handisi kukanganisa handiti? kukura zvishoma uye uone zvinhu zvaunotaura uye zvaunoita, izano rakanaka.
hongu hongu, :), zvirinani enda unochema kuna amai vako, ivo vachakuteerera :), saka kana nguva yacho ikauya kana iwe ukarambidzwa nekuenderera mberi nekutsika, usanyunyute.
Hahahaha uye zvakanaka kana chinhu chimwe chete chiri pachena kuti ndine amai hahahahaha (mati… shit ndave kutoziva rudzii redzidzo yauinayo, iyo yakashata kwazvo)
MuInternet jargon, troll kana trol1 inotsanangura munhu anotumira mameseji anokanganisa, asina basa, kana asiri pamisangano munharaunda yepamhepo, senge musangano wekukurukurirana, nzvimbo yekutaura, kana blog, nechinangwa chekutanga chekutsamwisa kana kutsamwisa. kupindurwa kwemanzwiro muvashandisi nevaverengi, zvine zvinangwa zvakasiyana uye zvinonakidza2 kana, neimwe nzira, kuchinjisa nhaurirano yakajairika mumusoro wehurukuro, zvichikonzera vashandisi vakafanana kutsamwa uye kutarisana.3 Iyo troll inogona kugadzira mameseji ane mhando dzakasiyana dzezvinhu senge hutsinye, kukanganisa, kunyepa kunonetsa kuona, nechinangwa chekuvhiringidza uye kukonzera kusanganiswa kwemanzwiro mune vamwe.
= uri troll
Mu internet jargon ... hahaha, zvakakudhura iwe zvakanyanya kuti ubudise izvo mu wikipedia? kana kuti geekpedia? hahahahaha, zvipe mukomana, inguvai yandachinja nyaya? Ini ndakangopinda kuti ndikugadzirise, asi semwana akanaka asinganzwe zvausingade kudzidza, zvachose ndiwe troll reiyi blog nekuti ndeye LINUX blog uye kwete iye: Nekuti ini ndachinjira kuOS X, chengeta icho chako kuti hapana ane hanya, dzidza kubva mukushoropodza kunovaka, zvinokushandira muhupenyu, uye rega kutamba zvine hungwaru zvausiri.
Ndine chipset iyo @ pandev92 inoshandisa, ndakatanga kutamba nealsa nekuti kurira kwacho kwakadzimwa pandakavhura Ardor neALSA uye nekutangazve zvese zvakagadziriswa ikarira zvekare. Haugone here kuwana rubatsiro kungo typha "alsa" mukoni uye nekuona sarudzo dzainokupa?
Uyo anomutevera, mutore.
Ini ndinoda rusununguko runopihwa neGNU / Linux 🙂
iTunes mutambi anotyisa.
tsime, idzi inzira dzekuona zvinhu, pandakaishandisa mumahwindo ini ndaitenda zvakafanana, ikozvino zvandaishandisa mu osx, nekuti maonero angu ashanduka.
Ini handioni musiyano pakati peWindows neOS X chokwadi.
Mukuita ine musiyano wakakura, uye chiri chinhu chiri kutaurwa mumaforamu mashoma chokwadi chokwadi :).
Hahahaha uye kuita kupi kunogona kupihwa mutambi wemimhanzi ipapo? munguva yainotora kutakura? mukushandisa kwako ndangariro? kukurumidza sei iwe kutsvaga kwaunofarira rwiyo? hahahahaha, izvozvi zvakanaka pakutsvaga mimhanzi ndinobvumirana newe, tsvaga nekukurumidza, nekuti kunze kweizvozvo inogadzira dhatabhesi yayo iri hombe kwazvo, uye mune mamwe mapoinzi zvakanaka…. kune vatambi vatove nani variko vanozviita, sezvo ini ndambokuudza nezve Linux inoshamisa Teerera, nekukurumidza, mwenje, inobatsira…. zvakadaro.
kuita sei? kutanga nguva, nguva yekufamba pakati pemabutiro, kutsikisa nziyo uye zvimwe zvakawanda, asi chii chauri kuzoziva :).
iTunes yeWindows ine yekupenga ndangariro yekushandisa iyo ini handitomboishandisa kuishandisa iyo iOS iri muPod Touch uye maPhones. Semutambi wemimhanzi paRedmond system ndeyekuchema, asi kuMac, zvinongori "zvakanaka" sezvo ichishandisa iyo Cocoa system uye nekudaro mutsauko wayo wakashata pakati peiyo Windows vhezheni uye iyo Mac vhezheni.
Pakati pe QuickTime neVLC, ini ndinosarudza VLC (chaiyo media player) kuti ive nyore uye kugona kutamba mafomati akasiyana enhau ari pamapuratifomu ese. Ini handitombo shandisa QuickTime kushanda neAdobe Premiere uye Mushure meMhedzisiro.
Musiyano mukuru pakati peOSX neWindows NT 5.X / 6.X ndeyekuti, muOSX, unogona kuteedzera ZVESE mafaira ezvirongwa panguva imwe chete, ine zita remushandisi uye kiyi yechigadzirwa inosanganisirwa. Kune rimwe divi, muWindows, zvirinani iwe une chengetedzo inoenderana nerejista raibhurari yainayo, nekuti kunyangwe iwe ukaita mediocre copypasta, chirongwa chakadai chekushandira hachishande uye zvirinani une chengetedzo iyo Suite yako ichaita. dhizaini senge yeAdobe, semuenzaniso.
Kumwe kwekusiyana kukuru ndekwekuti Microsoft yakapfava zvikuru nemitemo yayo yekuteedzera uye kugovera patsva, iyo inokurudzira kuti uvimbe zvakanyanya pachirongwa pane OSX, ayo mazwi nemamiriro ayo ari tsamba yakafa munyika zhinji, asi havana iko kusununguka kwekumisikidza uko kune Windows paPC nekuda kweropa rayo GUI.
Panyaya yekugadzikana, ese ari maviri ari par. Iwo maWindows chete anozivikanwa neayo Achilles zvitsitsinho kubva kumusoro kusvika kumagunwe uye chete muOSX ndipo pavanoshandiswa kubvumira malware kuti apinde uye sezvo paine kashoma kesi umo iwe uchirasa data senge muWindows, hazvidiwe kuisa antimalware (muLinux. Izvo hazvidiwe kuti uise antivirus senge ESET's, nekuti mhinduro yekushandisa inokurumidza kupfuura muOSX neWindows).
Tarisa chokwadi ndechekuti ini handina kumbobvira ndaita hunyengeri hwekopi yekunamatira yeOS X, asi iro bhatani rekuti iwe ungobvisa iyo «app» (iyo yandinopedzisa mamwe MAriCa kureva chirongwa) kubva kunyorera dhairekitori uye ndizvozvo, nekuti pandakaisa Final Cut uye ndakaivandudza nekuti yakandikumbira kiyi yekurejista kiyi uye sezvo ini ndisina ini ndakaenderera ku "uninstall" kuti ndidzokere pane vhezheni yapfuura uye hapana chaizonditendera kuti ndiisezve nekuti zvinofungidzirwa kuti chirongwa ichi chaive chiripo, mune mashoma mazwi chaicho chaicho kudiwa kubva SO.
Kana iri antivirus, nekuti iyo imwechete Apple «yakaratidza» zvine hunyoro imwe nguva yapfuura kuti AV iiswe kubvira: «Haasi ese masisitimu anoshanda asina hutachiona mahairasi» hahahaha, uye zvakanaka zano iro harisisiri panzvimbo yako kuti ivo vanotova neiyo yakasanganiswa AV inonzi xProtect uyezve kudada kwavo hakuvatungamiri kuti vabvume izvozvo, handizvo here? Zvakaipisisa pane zvese ndezvekuti ivo havashandise mabhii asiri ekuuraya uye iyo DEP uye nekutenda kune izvi hakuna hutachiona paPC saizvozvo, uye zvakanaka izvozvi zvishoma nekutenda kune UEFI inovengwa neLinuxeros, asi hei ndizvo zvazviri, Apple yakaipisisa chiuru kupfuura Microsoft uye tisingataure vateveri vayo.
Kutaura chokwadi, mazhinji ezvirongwa izvo Apple zvine maitiro akashata kwazvo neakazvimiririra interface, iyo kunyange VLC, iyo inogadzirwa neQT, inodarika ivo (ndosaka ndichivadana kungoti "maapps").
Zvisinei, pachinzvimbo cheOSX, ndinokumbira nemutsa kuti iwe uise OpenBSD ne KDE kuitira kuti uone kuti rakakura sei sisitimu inoenzaniswa neOSX.
Mhh @ eliotime3000, kuita hakunei ne aqua, iko kunyorera senge tsamba, iwork, safari, aquamacs nezvimwe. vane mashandiro akanaka kwazvo, uye pachinzvimbo clementine pane angu pc zvinokambaira (zviri mu qt), uye ini ndine yakavhara zvishoma i5 3570k.
Zviripachena chero munhu anoda kushandisa osx, anoishandisa nezvikonzero zvakasiyana kwazvo kubva kune anokwanisa openbsd mushandisi, uye mazhinji ezvikonzero anogona kupfupikiswa mumaziso eziso (zvakanyanya kuzviisa pasi), uye kushandiswa kwezvimwe zvinoshandiswa senge ms office, adobe photoshop, pfungwa pro, garaji bhendi (XDDD iyi ndiyo yandinoshandisa) kana chero imwe application yekutengesa.
Zviripachena kuti hapana OS yakakwana, kune OS inovhara akasiyana profiles uye hapana mumwe weavo vashandisi akaipa kana nani kupfuura mumwe.
Ndakaita chirevo pane ino saiti uye zvaive sezvazviri zvakabviswa ¬¬
Huye, iyo general aesthetics yeOS X inoshamisa, ini ndichiri kufadzwa neiyo minimalism yeApple makomputa kunyangwe ini ndichiziva kuti OS yayo chestnut. Ini handichinje kubva kuGNU / LINUX kana kutamba izvozvo kune izvo kune zvinonyaradza (uye chiutsi) kunyangwe ini ndisiri mutambi chaizvo kutaura. Ndiri kushandisa Trisquel 6.0 uye kare 5.5 kweinopfuura gore uye studio netbook ndinotarisira kuisa Elementary OS (beta 2) mumazuva mashoma anotevera.
Nezve vatambi, ndinoda Mimhanzi uye Banshee, kunyangwe iyo yekupedzisira ndakarega kushandisa ndichifarira iyo yekutanga. Zvikasadaro ini handina kukwanisa kukuudza.
Pindura kune Fungus
Handina mari yandinoshandisa paconsole yandichatamba kaviri kana katatu pasvondo xD awa rimwe kana maviri-
Muchokwadi, makomputa avo ndiwo anondinakidza zvishoma, nhasi vaburitsa makomputa akawandisa akawanda zvakafanana kune mazana matatu / mazana mana emauro mashoma nezvikomborero.
Nezve poindi yechipiri, handizive kana wakamboshandisa mimhanzi (http://flavio.tordini.org/musique) aiwa hongu hongu wanga uchitaura kune chimwe chinhu chakadai, mumhanzi mune fedora inowanikwa munzvimbo dzekuchengetedza.
Pindura kune lewatoto
Mimhanzi kubva kune gnome uye mimhanzi kubva kune yekutanga ichavandudza nekufamba kwenguva, izvo zvandingade kuona zvakare mu linux chirongwa chakafanana nekodekit.
mimhanzi yepakutanga ndiyo yandinofarira zvakanyanya mu gtk asi ichiri kushaya zvinhu zvakawanda 🙂
Nightingale ine SHOUTcast seredhiyo
Ndinoda kugovera ruzivo rwangu. Ndanga ndichishandisa Linux kweanopfuura makore gumi nemaviri uye panguva iyoyo ini handina kushandisa imwe kunze kweWindows kune zvimwe zvinhu. Ndanga ndapfuura nemazhinji enzvimbo dzeparadhiso nedesktop. Ndiri uye ndinotenda kuti ndichave nenyika yepachena kwemakore mazhinji. Zvisinei, ndakanga ndisina kuedza Mac.
Munguva pfupi yapfuura (2 makore apfuura) Ini nehunyanzvi ndakazvipira kune iOS kuvandudza pakati pezvimwe zvinhu. Kubva pakutanga ndakaedza kushandisa emulators kumhanyisa MacOSX paLinux asi mune dzakawanda mamiriro zvaisagoneka. Mukupedzisira ndakanga ndisisina imwe sarudzo kunze kwekutenga Mac Mini.
Ichokwadi ndechekuti hapana kwese padhuze nekuipa seWindows. Iyo ine kugadzikana kwakanyanya kupfuura apa. YeLinuxero inosununguka nekuti iwe une chinongedzo ne bash, kuve UNIX huzivi hwemafaira uye system yakafanana.
Asi ini ndichiri kusuwa Linux. Iyo poindi yerusununguko yekuziva zviri kuitika uye nei muzvinhu zvese yakakosha kwandiri. Ehe, Mac inoshandiswa chaizvo uye yakagadzikana, ine mhedzisiro yakanaka uye kuyerera, yakanyoroveswa, asi mushandisi haana sarudzo kana achisarudza zvekuita nehurongwa hwavo. Iyo yakanaka kwazvo ... inogona kudaro. Ini ndinotenda kuti runako rwunozviisa pasi uye avo vasingafarire kutaridzika kweMac havabvumidzwe kuchinja kutaridzika kwayo.
Muchidimbu, ndinofunga iyo yakanaka yekushandisa system, kuti iwe ugone kushanda nayo zvakakwana, kuti haina kuoma kuenderana nayo kana uchibva kuLinux, nezvimwe ... asi haina chimwe chinhu chakakosha kwandiri: Rusununguko.
Hechino chidzidzo chekuti ungarekodha sei zvemukati odhiyo yemuchina wako. 😉
Salu2 yaJesu 8)
Nezve libreoffice, ichokwadi kuti inoda inovandudzwa, asi nerombo rakanaka ivo vatove kushanda pairi.
Iyo v. 4.1 ichauya nechepadivi (kunyangwe isina kuvhurwa nekutadza ndinofunga):
Uye zvakare, ivo vanozochinjawo mune inotevera vhezheni kana mune anotevera ma icon nekukasira kune akawanda akajeka iwo:
Nezve calc, zvinoita sekunge kufambira mberi kukuru kuri kuitwawo pairi:
Ndo zvandiri kutaura kakawanda, Linux iri kuvandudza zuva nezuva, uye izvo zvaunowana mwedzi unotevera zvinogona kunge zvisina chekuita nezvatinazvo nhasi. Kune vanhu vazhinji vachiri kufunga kuti maLinux anoshanda masisitimu akafanana nezvavaive makore gumi kana gumi nemashanu apfuura.
iwo ma icon anotaridzika senge fenza iyo yakatumirwa pano (https://blog.desdelinux.net/faenza-iconos-para-libreoffice-4-0-0/), iyo yandaishandisa nekuti vaitaridzika zvakanaka ... ndinofunga nzira iri kutevedzwa neLibreOffice yakanaka, nekuti zvirinani mukugadzirwa kwaityisa (tisingatauri kuti kunyangwe iine hukama hwakanaka neHofisi 2003, ichiri kushaya iyo ye 2007 uye zvichikwira, uye kuti mafomati matsva akavakirwa paXML akabuda kare kare), uye wedzera kune izvo zvinotaridzika mu KDE
Kana vakataridzika vakaenzana zvakakwana, zvinoita sekunge izvozvi dhizaini iyi yave yemafashoni, uye nekuwedzera munyori wefaenza-libreoffice iri kubatanawo neaya matsva.
Uye dambudziko harisi rekuti MS inoita zvese zvinogoneka nekuti Hofisi yayo haienderane neOveroffice kana Libreoffice? Kana Libreoffice ichingoenderana neHofisi 2007 uye 2010, ngatione zvinotora nguva yakareba sei kuchinja fomati zvakare.
Hapana, mafomati e oxml akavhurika ..., dambudziko nderekuti ndakanga ndazvikanda kare kare, ndichiziva kuti zvainetsa kuita.
Nezve kushandiswa kweOSX86 iyo @ pandev92 inoshandisa, ndinofanira kutaura zvinotevera:
Ini ndakaisa iAtkos 7 mune yangu yekare uye ndikatambura 1st PC Chips. chizvarwa, icho chakamhanyisa OSX Leopard inosimudza pasina matambudziko. Asi mushure mekumisikidzwa sisitimu, zvakatora zana ramakore kuti iyo aqua interface iite zvizere. Kana iwe uchikwanisa kuvhura iyo aqua interface yeiyo OSX yekumisikidza ine zviyero 32MB yevhidhiyo uye pamusoro peiyo vhidhiyo yacho yanga ichibva kuS3, nei isina interface yakangoerekana yatakura iyo payakatogadzwa?
Ndichiongorora gare gare, ndakashamisika kuti ingangoita 256 MB yevhidhiyo yaidikanwa kuti OSX interface irambe ichimhanya (zvakapetwa zvakapetana neiyo Aero interface yeWindows Vista / 7), uye kana tikawedzera nekukasira kuwedzera kwekushandisa zviwanikwa pakushandisa iyo flash player kana uchiona mavhidhiyo eYouTube, iyo GUI inogona kupunzika munzira ine njodzi kupfuura Windows Aero pachayo inomhanya neFlash Player.
Nekudaro ndakafunga kusaisa OSX paPC nekuda kwekupenga kwayo vhidhiyo yekushandisa neayo Aqua interface, uye kuti ini ndaizoiyedza mu "yakasikwa nharaunda" (monopoly, monopoly kwese kwese) uye nekudaro kudzivirira matambudziko.
Iwe murume, asi zvakajairika nhasi ndezvekuti munhu ane angangoita 512 mb graphic…. Nhasi kunyangwe gt610 (poop poop poop kadhi), unogona kufambisa nharaunda ye aqua nyore.
Pamwe chero pc ye500 / 600 euros, ine mamwe mashandiro pane iyo mac mini kana iyo imac ine Intel mifananidzo ...
Hongu, ndinoziva, asi kumashure ipapo ini ndanga ndichiri kushandisa iyo Windows Vista Ultimate PC jumper kune imwe INRI, uye zvainyanya kutyisa kwandiri uye neiyi poop internet kumhanya yandaive nayo ... Kusvikira ndawana mukana wekutora Debian Squeeze mushure meizvozvo Mushure mekupfuura nenjodzi, calender yangu yatodzingwa yakatanga kurarama nekumhanya kwayo, uye kubva ipapo ini naDebian Wheezy neWindows Vista ine HP Workstation iri mumamiriro ezvinhu kuti isatambura sePC yangu Chips ye 1. chizvarwa.
Ngatione my hackintosh is (was it?) An HP DV6000 is C2D of 2.1 4 in RAM and 512 in video GT 8800, I also installed on my desktop that is ina i7 of 2.66 Ghz 12 in RAM 1 Gb video Nvidia 220 (yes yes already Ini ndoziva) uye huasa huwandu hwekuoma dhiraivha, OS X yakandishandira reeebien, asi zvirokwazvo hapana chandingaite muOS X uye kwete muWindows saka ndakarasa iyo yekushandisa system crap, nekuti kana ndichiita izvo zvekuvandudza izvo zvakare Iwo akakura nekuti anoenda kuna dhiabhori uye zvakare tinofanirwa kunge tichiisa zvakatemerwa MAZANO mune zvakarongeka.
Zvinondishamisa ini Elio ndezvekuti iwe wakakwanisa kuisa iyo system pane iwo muchina hehehehehe, ndinofungidzira iwe waifanira kuisa zana mapaundi ekugadzirisa pakutanga.
IAAtkos yandaishandisa yaitova nerutsigiro rwemhando idzi dzemabhodhi epamusoro. Zvisinei, ini handina kumbobvira ndaisa hackintosh zvakare nekuda kweiyo inorema GUI yayaive nayo (kana ndichida GUI iyo yakanaka chaizvo, ndaizoshandisa KDE paGNU / Linux uye Aero paWindows Vista / 7).
Mwedzi wapfuura ndakaedza MacBook uye ndakaona kuti kunyatsovhara chirongwa muOSX, ndinofanira kuita CMD + X kuitira kuti ivhare chirongwa uye isatore imwe RAM. Pamusoro pezvo, ndanga ndine rombo rakaipa kuti ndive nebhatani-bhatani rekubata pamwe nekusagona kwekudzvanya chaiko nekhibhodi ... ndakanyatsonzwa ndakarasika kupfuura amai vaMarco pandakatadza kuwana kiyi dzemakomendi uye mabhureki uye zvirevo (uye icho chaive muchiSpanish).
Ndinovimba OSX inovhara mapurogiramu ako nezvakanaka nekungobaya bhatani red bhatani uye kwete kuita CMD + X kuvhara chero chirongwa.
Ini ndinobvumirana zvachose. Kunyangwe ini ndisina kumbove nematambudziko ne pulseaudio (Hardware pamwe) ini handina kumbobvira ndakwanisa kurekodha zvemukati kurira uye micro, uye izvo kugadzira podcast zvinouraya.
Ndinoda kutaura kuti neniwo ndakasangana nenyaya dzandinofunga dzinofanirwa kutariswa.
- matambudziko kana uchiverenga maCD. Ndinogara ndinavo nguva dzose. Uye ini handisi kureva maCD edzimba (zvinosetsa, ivo vakanaka kwandiri), ndiri kureva maCD andakatsva nedata rangu (magwaro, mifananidzo, mafirimu ...) ndinogara ndiinazvo, uye zvisinei nemapakeji Ndinoisa, hazvifi zvakanyangarika. Muchokwadi, ikozvino ndiri paWindows kuti ndikwanise kupfuudza zvinhu kuDD yangu yekunze, nekuti nezuro ndakatadza zvakare mushure mekuisa ini handizive kuti mangani mapakeji.
-matambudziko newifi. A classic. Kunze kweUbuntu, ma distros ese andakaedza akandipa matambudziko mune izvi. Uye zvakare, dambudziko rinodzokororwa: mutyairi weWi-Fi haawanikwe nekutadza. Parizvino zvakanaka, hapana chinoitika. Ini ndinoenda kusarudzo yedunhu rega kuti ndiiise, uye pano matambudziko anotanga. Zvikanganiso panguva yekuburitswa kwemutyairi, matambudziko ekusawana mapakeji anodiwa kuti umise ... Kristu, handizive kuti vanozviita sei, asi pese pandinoisa distro kuti ndiyedze, ndinorasikirwa nemaawa maviri mune izvi. Izvo zvinoita sezvisina kujairika kwandiri kuti Ubuntu yakagadziriswa zvakadaro uye mune mamwe ma distros zvese matambudziko, uye chinhu chimwe chete ichi chinoitika kuvanhu vazhinji.
-Zvino nezve LibreOffice, matambudziko acho haasi ehukama chete neiyo interface. Ndiko kuti iwe paunoyedza kuita chimwe chinhu chemberi kupfuura gwaro rakareruka nekuenderana kwakaringana iyo inotanga kutadza nenzira hombe. Ini ndazopedzisira ndawana mania hombe nekuda kwenhamba yenguva dzandakaturikwa ndichiyedza kupa fomati sarudzo kugwaro, kana kuti rakaparadza zvachose chimiro chegwaro nekurivhura chete.
Pindura kuna León Ponce
Mhh nezve wifi, ini ndaive nedambudziko rekudambura ne wifi iyo inofanirwa kunge inowirirana ne linux osx nema windows, uye pakupedzisira ndakasarudza kuisa wep kuchengeteka ..., iyo wpa yakaturika kubatana zvisingaite ...
Nezve maCD, iro chete dambudziko randave naro nderekutanga maJapan emimhanzi maCD, ayo mune linux players asingaratidze iwo ma tag, nekufamba kwenguva ndakazoona kuti imhaka yekuti vatambi vakaita setunes kana windows media player, vanoshandisa gracedb (inova muridzi, a dhatabhesi), nepo vamwe vese vachishandisa freedb, inova openource asi haina kukwana senge yekutanga.
Gracenote yakanaka muWinamp, asi muWindows Media Player uye iTunes haigone kuziva maalbham nevanozivikanwa maartist akagadzirwa kubva ma blank discs. Kana Gracenote akaburitsa yavo kodhi kodhi zvingave zvakanaka, asi ini handione mukana wekuti vazviitire zvinangwa zvavo zvinobatsira (sezvazviri nemavara echiJapan).
Asi izvo zvandisinganzwisise ndosaka gehena risingabudise mavollection edhisheni evavo vakanakisa maartist pamusika wekumadokero, sezvo paine kudzikira kwevechidiki huwandu munyika dzeJapan uye kuti vaimbi vekuJapan vakaenda kunoshanya kunyika dzekumadokero pamwe kazhinji.
Kana ari maCD epakutanga, ini ndakanga ndisina matambudziko saka handisi kunyunyuta nezvazvo. Kana iri yeWiFi, ini ndaive ndisina matambudziko neiyo TP-Link, nerombo rakanaka yaive neAltheros chipset iyo yakazviziva zvakakwana, yakashanda zvinoshamisa.
Padivi reLibreOffice, rine nzira refu yekufamba isati yanyatsoenderana OOXML.
Ini ndinoona chiri chiitiko chakanaka kuyedza akasiyana OS. Ini ndaishandisa CPM +, DOS, UNIX, Windows 3.1 / XP. Ini handina kumboshandisa MAC kana Kukunda mukuru kupfuura XP (kunze kweiyo Vista). Kana mumwe munhu aine mukana wekuyedza uye achida kuishandisa, regai vazviite uye kana vachida kuzvienzanisa neLinux, zvirinani ndidzidze nenzira iyoyo!
NemaPC angu akanunurwa maindasitiri, ndinogara naPuppy naDebian. Ini handitambe mitambo uye zvinenge zvese zvandinoita surf, ini handina mafrills senge 8GB ye RAM (ine simba kwazvo 512KB). Saka ndinokorokotedza avo vanoongorora kuseri kwemiganhu yandisingakwanise (uye vasina chinangwa chekupasa) uye vanondiudza nezvazvo nenzira yekuvaraidza. Ndatenda.
Zvinotaridza kwandiri kuti chiratidzo cheiyo posvo nezve SO chakashata! Ndiri kushandisa Debian Stable + Mate + Iceweasel (kana Midori kubva pane yapfuura positi iri chaiyo).
simbi hupenyu akadaro
Kuzvitsoropodza kwe gnu / linux hakunyatsoita. sei? kungoitira chokwadi chekuti iri openource / yemahara software. Zvakanaka iyo openource / yemahara software inokupa iwe mukana wekuti kana iwe usingade chimwe chinhu, kana iwe uchifunga kuti chimwe chinhu chinogona kuvandudzwa. Iwe unozviita iwe unoshandura kodhi, ivo havakupe iwe kodhi yacho pasina, uye inoenderana nezvinodiwa. Uye zvakanyanyisa kana iwe uchizopa chikonzero nei wakachinjira kuapuro, ngachive chiri chechokwadi. Semuenzaniso, ini ndakaneta neLinux nekuti zvese zvinoitwa mukoni kana chimwe chinhu chakadai. Kunyangwe munhu wese akasununguka kusarudza OS yaanoda asi asingauye nezvikonzero zvisina musoro, chaizvo.
Pindura kune metalslife
Chero zvazvingava iwe unokanganisa, kubva pane yako maonero, iwo maonero ekuona anoshandawo kuzvirongwa zvemahara, kana usingaifarire, shandisa imwe, kana kudzokera kuchokwadi, nekuti nyika inokupa zvinopfuura izvo iwe unobhadhara mumitero gore rega rega8 hutano, dzidzo, rubatsiro rwemari, chekufambisa, kugadzirisa migwagwa), haugone kunyunyuta nekuti ivo vari kukupa zvakawanda ...
Pfungwa iyoyo haina kwainotungamira, chinhu chimwe chete chingati vanhu havagone kunyunyuta nezve Microsoft Windows, nekuti vazhinji havaribhadhare, uye une rusununguko rwekushandisa chero chinhu, uye nekufunga ikoko urikugadzira "cosmic conformism"
Iko hakuna chakadai saDebian Wheezy neGnome-shell ine Imwe Mamiriro Ezvinhu Menyu zvinowedzeredzwa, Mushandisi Themes inogoneswa kubva kuGnome-tweak-chishandiso (chakaiswa nekumisikidza paDebian) uye Dash kuDock kuwedzerwahttps://extensions.gnome.org/extension/307/dash-to-dock/) padyo nemusoro weZoncolor (http://gnome-look.org/content/show.php/?content=156189) uye Faenza mifananidzo (http://faenza-icon-theme.googlecode.com/files/faenza-icon-theme_1.3.zip) kana iyo nyowani Elementary 3 (https://launchpad.net/elementaryicons/3.x/3.0/+download/elementary.tar.gz).
Ndiyo reostia 😀
Uye kune avo vanoda chaiyo BSD yekuisa MaharaBSD mapere 😀
Zvirinani OpenBSD, nekuti kunyangwe Flame malware haigone kupinda iyo sisitimu.
Uye uyu ndiye mukomana mumwe chete asina kumbobvira ada kudzidza kushandisa JACK pamwe chete nePulseaudio, gadza ne sudo apt-tora kuisa pulseaudio-module-jack iyo module kuburitsa kurira kwekadhi remukati pamwe neJACK, mhanya IDJC, batanidza iyo JACK chiteshi PulseAudio Jack Sink kune zvinobatsira zvekubatsira kana kuFtr zvinopinda muQjackCtl (mune graphical nharaunda, haizorasike mukoni) shandisa maikorofoni muIDJC uye nyora zvakananga muflacc, ogg kana mp3 muIDJC Kuburitsa odhiyo yeiyo system pamwe ne maikorofoni. Ini ndinoramba ndiri pamusoro apa: kana iwe usiri kuda kudzidza kushandisa Linux, zviri nyore kuve Apple fanboy akanyatsodzidziswa kumanikidza mabhatani paAca kana kukwiza masikirini achichema nekuti iTunes haigamuchire kadhi yechipo yavakamupa muchitoro. Kune zvese zvisina basa izvo zvinopa tsitsi.
Ini ndakakuudza ka4000 kuti ndakashandisa jack ine idjc, uye ndikatowana rubatsiro kubva kunhepfenyuro gnu, uye haina kupedza kufamba zvakanaka, ndichaita sei mutambo wemutambo naJack? Uye kuti rekodhi rekodhi rekodhi jack pa nguva yekutsikirira? Hauzive here kuti komputa inofanirwa kushandira iwe kwete iwe yeayo?
Uye rimwe dambudziko randakapihwa naJack nderekuti chese chandakaita, ndaizorekodha odhiyo yedjc asi panguva imwechete ndaizviteerera, ndikanyarara ndaizorasa odhiyo yese, handivhure izvo zvakare kana sechipo.
Enda uye ikozvino chema kuna shelldon, kuti zvirokwazvo achada kuita matanho mazana mana, kuti zvimwe zvinoshanda kana pamwe kwete, nzira dzako.
Nenzira, sezvo iwe wakangwara kwazvo, gadzira peji ino chidzidzo paunorekodha zvemukati odhiyo yepc uye maikorofoni yako, uchitamba chero mutambo wemhepo 😀, kune nerd senge iwe hazvifanire kunge zvakaoma
Crybaby asi iwe hauedze. Ini ndatoisa nhanho uye ini handisi otaku, ndoda mutambi zvekuti haufare. Kuti uve flamer yepamutemo yeiyi blog, iwe une ganda rakapfava kana iwe uchiyeuchidzwa nezvehusimbe hwako hwekumisikidza, ndoda chirongwa, chero chirongwa mune yakajeka nzvimbo. Uye ini handizive kuti "shelldon" ndiani kana kuti unodzokorora chero chinhu ka4000, iwe usingazive moto (kana ndikati "s00b" pamwe unoziva zvandiri kureva?
Ini ndinokuudza kuti ndakapetwa kane chiuru zvakapfuura iwe ne linux, madhiraivha odhiyo, vhidhiyo dhizaini kumisikidza, kernel kuunganidzwa, uye nekuzivisa mabugs, saka mira kutenderera uchitenderera uye uite iyo yekujaira dzidziso, kana usingaite ini ndichafunga izvozvo Izvo hazvigoneke uye kuti urikungori kuisa chipfuva chako kunze.
Sezvinoita vamwe vashandisi, ndiwe mhando inoti:
»Hapana chinokundikana muLinux, uri shit»
Uye nekutenda kune vashandisi veyako caliber izvi hazvifambire mberi. Thanks nekundifungisa.
Iyi inharaunda, haupfuuri nemupepeti, kana ukazviudza kuti wakachenjera, unotiratidza vhidhiyo paYouTube yakagadzirwa newe, nhanho nhanho pamaitiro ekugadzirisa idjc nejack, pasina kuteerera kuzwi rako pachako sekudzoka. Uye iwe unondiratidza maitiro ekuti iite kuti ishande, jack uye pulseaudio panguva imwe chete nerekodhiyamu desktop, kuitira kuti chishandiso ichi chinyore vhidhiyo nemaviri maodhiyo masosi, uye ini ndichatora mufananidzo, zvikasadaro ndichafanirwa kukutora iwe kuti "genti uye muteresi "
Uye ndine here chisungo chekuraira asingabatsiri otaku asingakwanise kunyora mavhidhiyo ake ekuti anotamba sei mitambo yake isina musoro? Muchokwadi, iwe ndiwe wega wakandiudza kuti haugone kushandisa IDJC naJack naPulseAudio (uye nezvakanyorwa kuti dzidziso iri pane ino blog uye pane yangu bhurogu ine kushanya kwakawanda) handifunge, uye zvishoma nzira ine mutsa yaunondibvunza nayo. Pamwe uri benzi kunge nyurusi mukuda kumisikidza hunyoro hulk ine magirafu uye / kana odhiyo makadhi kubva kumakore gumi apfuura uye wakasarudza kuisa zvakashama uye pirate OS X 10.6 ine iAtkos usati wanyengedza kuti unonzwisisa kumisikidzwa kweIDJC. Zvakanaka, zvinorwadza chaizvo kuti ndakakuyeuchidza nezvehusimbe hwako (kana iko kushayikwa kweIQ?) Kugadzira chimwe chinhu muLinux; zvakadaro nzira chete yekudzidza ndeyekuita zvinhu, kwete nekuteedzera iyo yakasiyiwa GNU Radio blog / wiki (ichiripo here?) kana nekuisa pirated makopi eSteve Jobs uye Jony Ive's OS. Pamwe dai iwe waive uchishingaira zvishoma uye usinganyanye kusazvitutumadza mumwe munhu angakubatsira iwe kushomeka kushoma.
Hahahahaha bravoooooo yakanaka kwazvo Blade +1000
Uye ndine here chisungo chekuraira asingabatsiri otaku asingakwanise kurekodha mavhidhiyo ake ekuti anotamba sei mitambo yake isinganetsi?
1- Iwe hauzive kushandisa google
2- Iwe hauzive kuzviita sei
3- Iwe uri troll yakasimbiswa ine zita remavambo.
Ahh uye iyo dzidziso iwe yawakaitira yangu pc, haina kunyatso shanda: D, kunze kweizvozvo paive patove nedzidziso dzakaenzana neiyo pa internet uye zvakanyanya nani.
Uye pc yangu haina kubva kumakore gumi apfuura, aiwa changamire, inogona kunge ine simba kudarika yako nezvose 🙂
Wisp. Kana isu tiine idiki diki Hardware uye system gadziriso matambudziko ... Ini ndinofunga kuti iyo GNU / Linux system haizombobuda kunze kune inozivikanwa 1% bubble mune desktop desktop.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti havazi vese avo vanoshandisa komputa mahunyanzvi, vanopedza kudzidza kana maanjinjini ehurongwa kuti vari kubata nematambudziko ayo mukati mawo akakosha zvakanyanya kusvika pane imwe nhanho.
Uye kutaura nezve otaku fanboys antieverything:
Nenzira, izvi ndizvo zvandiri kuda kuti uite kuti undiratidze kuti iwe unogona
Kune vamwe vanhu vakandiudza kuti ndivaudze kana uchikwanisa kuzviita.
Zvakanaka, ini ndanga ndisingade kufudza iyo isingabatsiri moto asi nekuda kwevanhu ini ndichakupa chidzidzo chako:
Unogamuchirwa, ngatione kana uchidzidza chimwe chinhu.
blade kungoti iwe ukapa zvirevo zvePC yako kuti mwana uyu asazonyunyuta nezvazvo, kunyangwe hazvo achataura kuti komputa yake yakawedzera kumberi hahaha uchifunga nezvekuti anozviziva sei.
Iyo yakajairwa PC yakashongedzwa nemaoko angu madiki (Pentium pa2.7 Ghz, 4GB ye RAM, 250 GB hard disk, yakakamurwa neUbuntu Studio 12.04 uye Crunchbang Linux 11 Waldorf) yakabatanidzwa mifananidzo uye odhiyo kadhi (Gygabyte H61M-DS2) hapana mamwe makadhi kutamba mitambo isinganzwisisike senge moronic otaku. Saka chero munhu anogona kuverenga anogona kuzviita.
Akanaka kwazvo Brizno, sezviri pachena uyu nerd anotapukira akavhara muromo wake zvachose uye netarisiro yekuti vabereki vake vanomupa mari yaanoda kutenga Mac wake waanoda uye orega kutimomotera nehana dzake dzakachipa uye kuzvitutumadza, uye kana achinge aenda, anozoenda kunyorera yemadhongi akaita seappleweblog, maapuro kana chii chandinoziva.
Vhidhiyo yakanaka, @Brizno. Uyezve, ndichaiisa kuti ndikwanise kuita ma screencast angu kuti ndikwanise kuita zvidzidzo zvangu zveGNU / Linux (sezvo ini ndichishandisa Debian Stable neGNOME 3.4 Kudonha pa HP Workstation yangu yakagadzirirwa Windows Vista yandinoshandisa uye ndizvo pane yangu hard drive).
Nekudaro, JACK inoonekwa kunge yakajeka zvakanyanya kupfuura mamwe maodhiyo ekurekodha masisitimu muGNU / Linux. Kuremekedza kwangu.
Bvisa ichi chichemo mublog, ndapota Elav, usamurega atumidze zvimwe, pese paanorwa nenjere seizvi !!! hapana mhosva kuti kukura kudiki kunoratidza chikoro chepamusoro (pandev92)
mhoro, ndiri kuedza kuisa itunes pane chromebook yangu uye handikwanise ... ungandibatsira here? Ndatenda!
Pisi Linux Kutanga Beta Inowanikwa